राजनीति | नेपाल आज
Monday 22 October 2018 | सोमबार, ०५ कार्तिक २०७५
‘राजसंस्था फर्किन सक्छ’
बैशाख १० । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकासमन्त्री कमल थापाले जनताले चाहेमा गणतन्त्र खारेज गर्न सक्ने बताएका छन् । जनताले चाहेमा संबैधानिक बाटोबाटै राजसंस्था फर्काउन सक्ने मन्त्री थापाले बताए । ...
'चुनावपछि गाउँ–गाउँमा सरकार पुग्छ'
वैशाख - ९ । पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सरकार पुग्ने बताएका छन्। आज सदरमुकाम म्याङलुङमा गरिएको कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भने – ‘चुनावपछि सिंहदरबारका ...
कास्कीबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त १३ दलले मात्र भाग लिन पाउने
वैशाख ९ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कास्कीमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रुपमा १३ दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका छन्। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका २३ मध्ये १० दलले स्वतन्त्र ...
नेपाली कांग्रेसले बाेलेकाे पूरा गर्ने सभापति देउवाकाे दाबी
वैशाख ९ । नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीले अग्रस्थान प्राप्त गर्ने बताएका छन् । जनताले पत्याएको पार्टीका रुपमा काँग्रेस स्थापित भइसकेको दाबी गर्दै विसं २०७० को संविधानसभा ...
गायक विष्णु खत्री उम्मेदवारमा सिफारिस
वैशाख ९ । नेपाली लोकसंगीत क्षेत्रका चर्चित गायक विष्णु खत्रीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको गलकोट नगर समितिको बैठकले खत्रीसँगै पोलिटब्यूरो सदस्य ...
चुनाव चिन्ह बाँदर, काग, भ्यागुतो के मा भोट दिने ?
वैशाख– ९ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकमा ११ राजनीतिक पार्टीले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाएका छन्। चुनावी प्रयोजनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा २० दल दर्ता छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले मात्र दलीय ...
भारतले नेपाललाई दबाब दिएपछि चीनको सैन्य अभ्यास खुम्चियो
वैशाख –९ । भारतले नेपाललाई दिएको कडा दबाबका कारण नेपाल र चीनबीच जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास सानो आकारमा खुच्याउन बाध्य हुनुपरेको चीनले जनाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हालै ...
आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर मोर्चा चुनावमा जाँदै !
बैशाख–९ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न सरकार तयार भए निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान र साँझ बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, ...
दुई विद्यार्थी सङ्गठनबीच झडप हुँदा छ घाइते
वैशाख–८ । चितवन जिल्लाकाे कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा दुई विद्यार्थी सङ्गठनबीच आज दिउँसो झडप हुँदा छ जना घाइते भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी र एमाले निकट ...
बैतडीमा काँग्रेस नेतामाथि साङ्घातिक कुटपिट
वैशाख ८ । बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट मेयर पदका आकांक्षी ईश्वरदत्त भट्टमाथि साङ्घातिक कुटपिट भएको छ । गोठलापानीमा रहेको स्टार गेष्ट हाउसमा सुतिहेका बेला गएराति ११ बजेतिर भट्टमाथि कुटपिट भएको नेपाली ...
'निर्वाचनका लागि विप्लव माओवादीको गतिविधि सुरक्षा चुनौती'
वैशाख ८ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ११ जिल्लामा विप्लव माओवादीको गतिविधि सुरक्षा चुनौती भएको बताएका छन्। आजदेखि धुलिखेलमा सुरु भएको मध्यमाञ्चलस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने – ...
निर्वाचनका लागि घर फर्कनेक्रम बढ्याे
वैशाख ९ । बाजुरा जिल्ला बूढीगंगा नगरपालिका–१० का खम्म सार्की स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि भारतबाट घर फर्किएका छन् । उनी ८ वर्षपछि घर फर्किएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्न ...
सरकार मोर्चा बैठक निष्कर्षविहिन
वैशाख ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आव्हानमा आज भएको सत्तासाझेदार कंग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेश केन्द्रीत दलबीचको वार्ता निष्कर्षविहिन भएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको वार्तामा दुबै पक्ष अडानमा कायम ...
नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम मिल्दै, निकाले संयुक्त विज्ञप्ती (विज्ञप्तीसहित)
वैशाख ८ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम एकताको नजिक पुगेका छन । पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन दुवै पार्टीले सयुक्तरुपमा ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन गरेको छ ...
माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गर्यो घोषणा पत्र (पूर्णपाठसहित)
वैशाख ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । यस्ताे छ माअाेवादीकाे घाेषणाा पत्र दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, ...
गृहमन्त्रीद्वारा निरन्तर मन्त्रिपरिषद बैठक वहिष्कार, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिकै धज्जी
वैशाख ८ । वरीयतामा असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पटकपटक मन्त्रिपरिषद वहिष्कारले प्रधानमन्त्रीय ‘वेस्ट मिनिस्टिर’ पद्धतिकै धज्जी उडेको छ । मुलुकको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्रीले नै वरीयता निहुँमा मन्त्रिपरिषद बैठक ...
सिलवालको हातमा कसरी पुग्यो डकुमेन्ट भन्दै मन्त्रिपरिषदद्वारा छानविनका लागि निर्देशन
वैशाख ८ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेश गरिएको एउटा सरकारी कागजातको लिकेजबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । डीआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा ...
राप्रपा: पार्टीले सञ्चालन गर्ने सङ्घर्षको कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगन
वैशाख–७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगको गरिमा र संवैधानिक हैसियतबारे आफ्नो पार्टी पूर्ण रुपमा सचेत रहेको जनाएको छ । आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति आफ्नो दलको ध्यानाकर्षित भएको जनाउँदै राप्रपाले ...
आकांक्षी धेरै भएपछि एमाले कास्कीले मतदानबाट टुङ्गो लगाउने
वैशाख–७ । नेकपा एमाले कास्कीले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका आकांक्षी धेरै भएपछि मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने भएको छ । पूर्व जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष मानबहादुर जिसी, पूर्व मेयर तथा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष ...
दलहरुद्वारा प्रचारप्रसार समिति गठन
वैशाख–७ । नेपाली काँग्रेस भक्तपुरले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार गर्न प्रचारप्रसार समिति गठन गरेको छ । काँग्रेस जिल्ला सदस्य केदार खड्काको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको हो ...
निर्मलाका अपराधी पानीमुनि लुकेपनि छाड्दैनौंः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली